Kurumidza Tendeuka Pcb Assembly - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Pamberi pcbfuture.com ipa nekukurumidza Turnkey pcb gunganomasevhisi, vatengi vazhinji vanogara vachititaurira kuti havagone kuwana yakavimbika pcb gungano mudiwa webasa rekukurumidza kutendeuka. Matambudziko makuru avanotarisana nawo ndeaya:
a. Vazhinji vagadziri vaisada kupa prototype yemagetsi musangano masevhisi nekuti iyo odha huwandu ishoma.
b. Iyo zvemagetsi magungano makambani haikwanise kuodha zvese zvinodikanwa zvine paramende imwechete.
c. Ivo havana kukwanisa kuwana yakaderera mutengo pcb gungano makambani vachienzanisa ivo vanounganidza prototype PCBs ivo pachavo
d. Iyo PCBA inogadzira haina basa zvakakwana, haina kukwanisa kuunganidza zvigadzirwa zvavo nemhando yepamusoro.
Pcbfuture.com inovavarira kupedza izvi uye nekupa mhando yepamusoro uye yakachipa mutengo inokurumidza turnkey pcb musangano webasa.
PCBfuture ine hupfumi ruzivo rwunogadzira prototype uye yakaderera-kusvika-epakati vhoriyamu maPCB uye uine ruzivo gungano timu yekuona yako PCB gungano nekukurumidza. Yedu turnkey pcb gungano rinotungamira nguva ndiyo ipfupi muindasitiri, inokurumidza isu kutumira kunze kuungana maPCB kune vatengi vedu mumazuva matatu.
1. Pcb Prototyping inokurumidza mumaawa makumi maviri nemana
PCBfuture kutanga bhizinesi kubva pcb Kugadzira, isu tine yakasimba pcb kugona kunosangana neyako yakaoma projekiti yakatarwa. For The chete divi pcb / Double divi pcb uye 4 rukoko pcb, isu uchitsanya anogona kubereka muna 24 maawa.
2.Kurumidza shandura zvigadzirwa zvemagetsi kutsvaga
Pcbfuture yakavaka hukama hwakasimba hwekudyidzana nenyika dzakakurumbira zvigadzirwa zvekuparadzira senge Digi-Key, Arrow, Mouse, Avnet, uye Chip imwe yekumira etc. Isu zvakare tine kumisikidza kwakabatana kudyidzana neyekutanga mumiririri wepakutanga zvigadzirwa vagadziri. Uyezve, isu tine hupfumi hwakawanda hwezvinhu zvinowanzo shandiswa. Izvo zvinoita shuwa kuti tinogona kugadzirira zvemhando yepamusoro zvigadzirwa zvemagetsi nemutengo wakanaka uye nguva yekutungamira.
3. Kurumidza shandura emagetsi musangano masevhisi
Nokushandisa yakagozha uye yemhando SMT uye Kuburikidza * mugomba michina, isu tinokwanisa kuunganidza dzakasiyana mhando maPCB ane misted tekinoroji nekukurumidza. Zvakasiyana nevakawanda vePBB Assembly vagadziri, isu tine timu yakazvipira uye SMT gungano mitsara inoitisa yekukurumidza kutendeuka pcb gungano uye prototype pcb gungano odha.
Kubva kukurumidza tsika makotesheni sekuenderana nezvaunoda, pcb yekugadzira, zvinoriumba zvekutsvaga, SMT Assembly, DIP Assembly, Bvunzo uye kutumirwa, pfuurira nhanho mbiri zvichingodaro. Isu tine hana ye PMC Yekutevera kutevedzera maitiro uye kuona kuti tinokwanisa kutumira kunze kwemabhodhi kumutengi nenguva.
Base pane yakanakisa pcb yekugadzira uye yakavimbika inokurumidza kutendeuka zvinhu zvekutsigira rutsigiro, tinogona kuvimbisa kuti iwe unogona kuwana inogutsa emagetsi musangano masevhisi. Tiri kutarisira kushanda nemi nokuda pcb gungano muzvirongwa. Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota email ku service@pcbfuture.com.